Faradoboky ny inona [an-tsary]?
2010-11-15 @ 13:33 in Politika
Mba afaka nijery ny zavamisy indray ny tena ny alahady teo ka nanararaotra ny naka sary ny fampielezan-kevitra nataon'ny komity mpanohana ny ENY teny amin'ny kianjan'Alarobia. Faradoboka io fotoana alahady io mandra-piandry ny alarobia 17 novambra 2010 kasain'ny mifehy ny fahefana amin'izao fotoana hitsapana ny hevi-bahoaka izay lazaiko ho sadasada manan-tsoratra ihany. Azo itarafana mialoha ny taham-pandraisana anjara sy ny isambato mety ho azon'ny ENY eto Antananarivo sy ny manodidina manko ny any na dia mety hamitaka ihany aza izay fijery izay.
Ny fotoana niaingana tao an-trano dia eo amin'ilay heverina ho fotoana mampafana indrindra ny fanentanana sy ny horakoraka teny an-kianja. Somary gaga ihany anefa raha vao teo am-piandrasana fiara fitaterana fa dia efa misy sahady ireo miakanjo ny ENY no tafody eny amin'ny faritra misy azy. Nanahy avy hatrany aho hoe rava sahady angaha ny any nefa vao amin'ny telo ora folakandro izao? Nandeha ihany anefa noho ny fitiavana hahalala sy hampitana aminareo ny hamaroan'ny olona tonga teny.
Teny an-dalana dia nahitana mandrakariva tapikan'olona mizotra mody tsimoramora miaraka amin'ny akanjo misy soratra ENY. Toa olona diso fanantenana sa mba reraka kosa satria efa hatry ny maraina kosa ny fanentanana. Teny Alarobia anefa dia hita ho betsaka tokoa ny olona mifanaretsaka eo ivelan'ny vavahady atsimo noho ny hamaroan'ny mpivarotra hani-masaka. Misy fiara am-polony an'olo-tsotra ihany koa mitandahatra, tsy afaka hilaza velively aloha aho hoe an-jatony ny fiara miantsona heverina fa an'ireo mpanotrona ity faradoboka ataon'ny ENY eto Antananarivo ity. Hay betsaka ihany ny olona hoy aho anankampo. Sady marina no diso anefa io fijeriko ny hamaroan'olona io.
Marina fa betsaka ny olona tonga teny an-kianjan'Alarobia io alahady 14 novambra 2010 io saingy raha izaho ny mpitarika sy mpanentana dia tsy araka ny nantenaiko ilay fahatongavan'ny mpanotrona satria latsaka ambany noho izay mety hanaitaitra ny hafa. Ireo tonga teny koa tahaka ny mangina hafahafa izany ankoatra ireo eny amin'ny lohalaharana akaikin'ny sehatra angaha izay mitora-jofo hatrany. Tsy afaka ny hihosina eny anefa ny tena fa matim-bovoka eny eo.
Nony teny na dia ambiansy aza no tadiavin'ny mpijery dia tsy diso anjara ihany koa ny gidragidra. Nisy nifanaritaka hafahafa izany matetika ao afovoan'ny mpijery ao. Ny olona koa moa taitaim-baombina ka raha vao misy ny tahaka izany dia efa fikoropahana izaitsizy no hitanao eny. Tsy hay noho izany izay tena anton'ny savoritaka fa dia variana ny olona mijery sy mitazan-davitra.
Angamba noho ny hamaroan'ny akanjo tsy voazara teny an-kianja fa misy ny sekolim-pinoana lehibe eto Madagasikara sy malaza ho akaikin'ny FAT no nizarana tee-shirt ENY avokoa ny mpianatra tao aminy. Mety mba ho solon'ny kit scolaire kosa angamba izany paika izany sady fanentanana ny ray aman-dreny rahateo hifidy handrotsaka ny ENY. Misy manko ny hafatra nifanomezana avy amin'ny mpitondra fivavahana tao aminy izay manentana ny olona handray anjara amin'ny fifidianana ary ny fanomezana alalana ny mpanao propagandy ENY hizara tee-shirt any an-tsekoly heverina ho tsy mbola sahaza ny politika noho ny taona tsy ampy dia toy ny marika hoe isika fiangonana dia tokony hiara-mientana hanohana ny ENY. Impiry anefa ry zareo ihany no mpilaza fa tsy tokony afangaro velively ny fivavahana (sekolim-pinoana eto) sy ny politika.
Dia tonga ihany koa ny kara-pifidiananay. Ny tsikaritray avy hatrany ary hita amin'ny boriborintany samihafa eto Antananarivo dia ny eo amin'ny daty sy toerana nahaterahana mitovy avokoa. "vers*Antsirabe" ohatra ny ahy satria teraka tany Antsirabe ny tena. Ny an'ny teraka teto Antananarivo dia "vers*Antananarivo" no hita eo, tsy ahitana ny daty nahaterahanao. Mazava loatra fa mampiteraka ahiahy izany toe-javatra izany mba hahafahan'ny tsy ampy taona mandrotsa-bato angamba fa dia maro no tratran'io tsy ilazako hoe tratra avokoa ny kara-pifidianan'ny olona.
Ny hitako hatreto no mandrisika ahy tsy hifidy amin'ny alarobia ho avy izao satria "vitsy" ireo nazoto teny an-kianja ny mpanohana ny ENY. Ny mpanohana ny TSIA moa karazan'ny tsy hita tabilao mihitsy hatreto ka tsy hita koa hoe aiza ry zareo ny alaina sary. Ny tena mampisalasala ny olona manko dia ny eo amin'ny fanaovana ny TSIA sy ny tsy handrotsa-bato. Tsy manakana ny safidin'ny tsirairay aho na hanao ENY izy na hanao TSIA na tsy handrotsa-bato fa izay amiko ny fahalalahana na dia enjehina aza ny mpampandany ny tsy hifidy ho mariky ny tsy fankasitrahana ny ataon'ireo mifehy ny fitondrana ankehitriny eto Madagasikara.
Jentilisa 15 novambra 2010 amin'ny 15:32